मधेसी व्रि्रोह र मेरो राजिनामा | Madhesi - United We Stand
मधेसी व्रि्रोह र मेरो राजिनामा
April 16, 2007 at 8:11 pm2comments
रौतहट प्रि्रा पोखरियाका दलित बिरा माझीको नागरिकता प्रमाणपत्र हातमा परेपछि खुसीले हा“स्दा-हा“स्दै मृत्यु भयो । पटक-पटक धाए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रँप्त गर्न अर्समर्थ रहेका ५५ वषर्ीय दलित खुसी थाम्न सकेनन् र परलोकवासी भए । यो एउटा कटु सत्य र मधेसीको अवस्थाको सजीव चित्रण र सूक्ष्म विम्ब हो । यो आर्श्चर्यजनक घटना घट्नुभन्दा २ महिनापर्ूव देशले अभूतपर्ूव मधेस जनव्रि्रोहको प्रत्यक्ष्ँ अनुभव गरेको र्सवविदित छ । यो जनव्रि्रँेह २३८ वर्षेखि राज्य र सञ्चालकहरूद्वारा मधेसी समुदायप्रति गरिएको भेदभावपर्ूण्ा क्रियाकलाप तथा शोषण र दमनको समष्टि आक्रोशको कुल योगको रूपमा विष्फोट भएको हो । मधेस व्रि्रँेहमा समस्त जनता आफ्नो अधिकारका लागि उठेका थिए । जसमा जनता अग्रपंक्तिमा र नेता तथा दलहरू आफ्नो पहिचान र भूमिकाको खोजीमा पछिपछि लागेका देखिन्थे । संक्षेपमा जनता स्वयम्को नेतृत्वमा भएको व्रि्रँेह थियो ।शासक र शासकीय जातिलाई र्सवथा अचम्मित तुल्याएको यस व्रि्रोहको कारण र कारकको विश्लेषणमा आजसम्म पनि अनौठो भिन्नता छ । मधेसीलाई शासित र कायर ठान्ने पुरानो चिन्तन यसपटक चमत्कारिक रूपले ध्वस्त भएको छ । मधेसी पनि आन्दोलन गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने हेपाहा सोचको अन्त्य भएको छ । र साथै प्रथमपटक मधेसको वास्तविक महत्त्व सम्पर्ूण्ा देशवासी र विशेषतः काठमाडौंवासीले बुझे । यस जनव्रि्रँेहले शासकहरू, स्वनामधन्य मधेसी नेताहरू र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पृथक-पृथक सन्देश दिन सफल भएको छ । मधेसी जनताले प्रमाणित गरे कि केही समुदाय विशेषमा मात्र होइन कि मधेसी समुदायमा पनि आफ्नो अधिकारप्रति अभूतपर्ूव चेतनाको विकास भएको छ । र आफूप्रति भइरहेको शोषण, दमन र भेदभाव समाप्त गर्न मधेसी जनता अपराजेय भइसके । मधेसी नेतृत्वप्रति पनि यस संर्घष्ामार्फ जनताले स्पष्ट सन्देश दिए कि नेता भनाउ“दाहरूले साथ नदिए पनि जनता आफ्नो अधिकारको लडाइ“ स्वयम् लड्न सक्ष्ँम छन् । र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई मधेसी पहिचानको परिचय दि“दै सदीयौंदेखिको अन्याय र भेदभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउन यो संर्घष्ा सफल रह्यो र स्थापित गर्‍यो कि नेपाल सगरमाथाको मात्र होइन कि जनक र बुद्धको पवित्र भूमि हो र मधेस पनि यसै देशभित्र छ ।
व्रि्रँेह सुरु हुनासाथ यसलाई बदनाम गराउने कसरतमा केही पक्ष्ँ खुलेर नै लागे । आन्दोलनभित्र राजावादी घुसपैठ, विदेशी घुसपैठको सुनियोजित प्रचार आन्दोलन अवधिभरि नसुनिएको होइन । राजावादी अथवा दरबारपरस्त सावित गर्न केही बिर्सिएका बदनाम अनुहारहरूको प्रयोजनहीन गिरफ्तारी पनि गरियो । विदेशी घुसपैठको प्रचार पनि तीव्र पारियो । साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न विभिन्न प्रयत्नहरू गरिए । तर जनताद्वारा सबै विफल पारियो, किनकि यो जनव्रि्रोह थियो, प्रँयोजित कलाविहीन नाटक होइन । यसै सर्न्दर्भमा राज्यको मूढता, दमनकारी नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध मैले माघ १५ गते नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ूर्तिमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए“ । यो र्सवथा आत्माको पुकार थियो र यस कदमले व्रि्रँेहलाई नया“ उचाइमा पुर्‍याउन र राज्य तथा राजनीतिक पक्ष्ँलाई सम्बोधन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको हो । सम्भवतः देश र विशेषतः मधेसको इतिहासमा यस प्रकारको राजिनामाको घटना प्रथमपटक घटित भएको छ ।
मधेस व्रि्रँेहले आफ्नो उचाइ र बलिदानको अनुपातमा निकै कम उपलब्धि हालिस गरेको छ । गत जनआन्दोलनभन्दा झन्डै दोब्बर बलिदानको तुलनामा उपलब्धि थोरै हुनुको कारण व्रि्रँेहको संगठित राजनीतिक नेतृत्वको अभाव हो । यदि कुशल संगठित नेतृत्वमा जनव्रि्रँेह भएको भए उपलब्धि निश्चित रूपले बढी हुने थियो । मधेसी जनताको बलिदानको यश आठ दलले लिने होडबाजीले पनि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
यद्यपि नेपालको कथित भौगोलिक एकीकरण भए पनि यथार्थमा भावनात्मक र आत्मीय एकीकरण जनआन्दोलन- ०६२।६३ को अवधिमा भएको हो । जसमा हिमाल, पहाड र मधेस तथा सबै समुदाय, जातजाति लोकतन्त्रको आन्दोलनमा समान सहभागी भई राज्यको संरचनाको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य बोकेका थिए । तर अन्तरिम संविधानमा मधेसी, जनजाति र दलितहरू ठगिएको ठहरका साथ नया“ आन्दोलनको सिर्जना गर्न व्यस्त भएका छन् । यसको समाधानको एकमात्र उपाय र्सार्थक संवाद नै हो । तर राज्यपक्ष्ँ वार्ता गर्न उदासीन देखिन्छ । फलस्वरूप समस्या निरन्तर जटिल बन्दै संविधानसभाको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने सीमासम्म विकसित हु“दैछ ।
जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू यथार्थमा समयमा संविधानसभाको निर्वाचन चाहेका छैनन्, तर कलंक र आरोप मधेसी जनता, आदिवासी/जनजातिमाथि थोपर्न षडयन्त्र गर्दैछन् । यस षडयन्त्रलाई चिर्न मधेसी, आदिवासी/जनजातिले परिपक्व व्यवहार गर्दै आवश्यक परे संविधानसभाको र्सार्थक निर्वाचन गराउन आन्दोलनमा उत्रिनर्ुपर्ने अवस्था आउ“दैछ । किनकि यथार्थमा संविधानसभाको आवश्यकता यी सामाजिक समूहलाई बढी छ, अन्य पक्ष्ँलाई सरकार सञ्चालनको प्रविधि परिवर्तन भए पुग्छ ।
मधेस व्रि्रँेहको सर्न्दर्भमा भएको जनधनको क्ष्ँतिको उचित छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन गठनको माग आममधेसी जनताको माग हो । राजामाथि ढुङ्गा प्रहार हु“दा वा गौर घटनाको सम्बन्धमा तुरुन्त छानबिन आयोग गठन भयो, तर मधेस आन्दोलन सर्न्दर्भमा छानबिन आयोगको गठन नहुनुले मधेस विरोधी मानसिकता स्पष्ट झल्किन्छ र यस प्रकारका गतिविधिले मधेसी स्वाभिमानमाथि कुठाराघात भएको छ । यी र यस्ता प्रश्नहरू जीवन्त रह“दासम्म संविधानसभाको र्सार्थक निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भइरहन्छ ।
मधेस समस्या र आसन्न संविधानसभा	A White Paper:Some Perspectives on Resolving the Terai Conflicts
1. Son of Tirhut | May 6, 2007 at 2:30 pm
These things are 100% true and your performanace too not bad.
2. sudesh | August 19, 2014 at 1:53 am
u rashit hole…son of bitch